Toamasina : mpiasan’ny Jirama ireo mpangalatra herinaratra | NewsMada
Toamasina : mpiasan’ny Jirama ireo mpangalatra herinaratra
Voalaza, matetika hatramin’izay, fa olon-tsotra ny mangalatra misintona herinaratra ivelan’ny kaontera. Nambaran’ny talem-paritry ny Jirama Toamasina, Veloson Léonard, ny asabotsy 14 oktobra teo, fa efa ela ny nahalalany fa misy ny halatra jiro sy/na rano, ka narahiny maso ny mpiasa sy ny mpanjifa.
Nisy vokany izany ka fantatra ny olona roa, samy mpiasan’ny Jirama sady mpivady ary anisan’ny tompon’antoka amin’ny halatra goavana, tratra tany amin’ny fokontany Ambalamanasy, ny zoma 13 oktobra teo. Miasa ao amin’ny sampana herinaratra ao amin’ny Jirama Toamasina ilay lehilahy ary ao amin’ny sampana rano ilay vehivavy vadiny. Voalaza fa efa an-taony maro ny nanaovana sy nanomanan’izy mivady izao asa mahavanon-doza izao. Antony, efa misy lasa any ambanin’ny fakan-kazo avokoa ireo tariby mitondra herinjiro sy ny fantsona mitondra ny rano, manaparitaka amin’ny tokantrano miisa 80. Mandoa volan’ny jiro sy/na rano any amin’izy mivady ireo tokantrano ireo. Tsiahivina fa sokajina ho heloka bevava ny misintona herinaratra sy rano ivelan’ny kaontera.
Manentana ny rehetra ny talem-paritra Veloson Léonard, fa tokony hanatona avy hatrany ny biraon’ny Jirama ny mpanjifa raha vao mahatafiditra jiro na rano nefa tsy tonga ao anatin’ny iray volana ny faktiorany, sao sanatria nahazo fampidirana tsy ara-dalàna.
Angatahin’ny fitantanana foiben’ny minisiteran’ny Angovo izy mivady ireo, ary hampiakarina filankevitry ny lalàna (conseil de discipline), hamoahana fanapahan-kevitra.